किशोर नेपाल, जेष्ठ ८, २०७५
मैले व्यवस्थापनमा आफ्नो प्रस्ताव लगें । छलफल सुरु भयो । अनेकन् तर्क आए । कम्पनीले यस्तो पत्रिका निकाल्न थालेपछि स्थानीय प्रकाशनहरूको रोषको सामना गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो । छलफलका क्रममा ती तर्कहरू निरस्त भए । पत्रिकाको नामको खोजी हुँदा मैले नै सुझाएँ ‘साप्ताहिक’ । सबै कुरा जुट्यो । कम्पनीले बहुरंगी छापाखाना ल्याएकाले त्यसको चिन्ता थिएन । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ ८, २०७५
इनसाइटले मंगल ग्रहमा पुगेर त्यहाँको सतहको अध्ययन गर्नुका साथै त्यहाँ जाने भूकम्पसमेत मापन गर्न सक्नेछ । ९९ करोड ३० लाख डलरको उक्त परियोजनाले मंगल ग्रहको आन्तरिक परिस्थिति अध्ययन गर्नेछ । यो यानले मंगल ग्रह मानिसका लागि बसोवास योग्य छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्नेछ । पुरा पढ्नुहोस्
सस्तो त छैन, तर साह्रै उपयोगी छ । हामीले यसमा झन्डै ३ करोड लगानी गरेका छौं । त्यो भनेको सानोतिनो लगानी होइन् । प्रविधि महँगै भए पनि अब हामीले त्यसको पर्याप्त उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । देखाउनका लागि मात्र लगानी गरेर त भएन । प्रतिफल पनि लिन सक्नुपर्‍यो । पुरा पढ्नुहोस्
तानसेनको एकमात्र खेलमैदान टुँडिखेल अन्यत्रको भन्दा केही सहज छ, तर यो मैदान पनि मापदण्डअनुरूप छैन । वर्षायाममा हिलाम्मे हुने उक्त मैदान हिउँदमा धुलाम्मे हुन्छ । गत वर्ष त्यहाँ दूबो त रोपियो, तर मैदानको अवस्था उस्तै छ । पुरा पढ्नुहोस्
जनक तिमिल्सिना, जेष्ठ ८, २०७५
गुणस्तरीय शिक्षा, अब्बल प्राज्ञिक जनशक्ति, उत्कृष्ट शैक्षिक क्यालेन्डरका कारण केयूले नेपाली शिक्षा जगत्मा फरक मानक स्थापित गरेको छ । स्वदेशी बजारका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो टेवा पुर्‍याइरहेको केयूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि उच्च साख छ । पुरा पढ्नुहोस्
भिषा काफ्ले, जेष्ठ ८, २०७५
२०६९ सालमा स्थापना भएको यो केन्द्रमा सुरुका दिनमा तीन जना चिकित्सक, एक जना नर्स एवं एक जना रिसेप्सनिष्ट कार्यरत थिए, जसमा अंग प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, नेफ्रोलोजिस्ट डा. कल्पना श्रेष्ठ तथा कनिष्ठ चिकित्सक डा. लुसन सिंह थिए । संस्था स्थापना भएको ६ महिनापछि मिर्गाैला बिग्रनेहरूका लागि डायलसिस सेवा सुरु भयो भने त्यसको तीन महिनापछि उक्त केन्द्रले पहिलो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
चलचित्र ‘अमेरिका बोइज’को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । जयन जे बाइवाको सङ्गीतमा जयन जे बाइवा, रोशन थापा र सुरज सिंह ठकुरीको स्वर रहेको चलचित्रको ओएसटी गीत सार्वजनिक भएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
साउनको अन्त्यसम्म नै सहरभरि आँप उपलब्ध हुन्छ । आँपको सिजन प्रारम्भ हुनै लाग्दा चलचित्र क्षेत्रमा पनि यसको चर्चा चुलिन थालेको छ, यद्यपि यो आँप खान भने मिल्दैन । चलचित्र क्षेत्रको उक्त आँप एउटा जोडीको छोटो नाम हो । आँप अर्थात् आँचल शर्मा र पल शाह ।पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, जेष्ठ ८, २०७५
हालै एक प्रसंगमा प्रियंकाले आफूलाई चाहिएको श्रीमान् कस्तो हो भन्ने कुरा भने खुलाएकी छिन् । प्रियंका भन्छिन्, ‘त्यो पुरुष मलाई देखेर पागल होस्, अत्यन्तै माया गर्ने खालको होस् अनि मनको कुरा खुलेर भनोस् ।’ पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेत्री निष्मा घिमिरेले आफ्नो श्रीमान कोरियोग्राफर तथा अभिनेता गम्भिर बिष्टलाई पछारेर कुटपिट समेत गरेकी छिन् । तीन महिनाअघि कोरियोग्राफर गम्भिर बिष्टसँग विवाह गरेकी निष्माले गम्भिरलाई अरु केटीसंग नजिकिएको भन्दै पछार्दै भकुरेकी हुन् । पुरा पढ्नुहोस्